» चितवन मेडिकल कलेजको ४ गम्भिर गल्तीले बालकको मृत्यु भएको परिवारको आरोप
चितवन मेडिकल कलेजको ४ गम्भिर गल्तीले बालकको मृत्यु भएको परिवारको आरोप
१५ बैशाख २०७६, आईतवार १३:२८ प्रकाशित
वैशाख १५, चितवन –
उपचारका क्रममा ९ महिने बालकको मृत्यु भएपछि चितवन मेडिकल कलेज २ दिनयता तनावग्रस्त भएको छ । गोरखा घर भई हाल चितवनको रत्ननगर नगरपालिका १५ मा बस्दै आएका रुपेस घिमिरेका ९ महिने बच्चाको मृत्यु भएपछि मृतकका परिवार र आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गरेका छन । उनिहरुले सनिवार अस्पतालको मुख्य गेटको सिसा फुटाएका छन । तनाव बढ््दै गएपछि अस्पतालमा सनिवार दिनभर प्रहरीले पहरा दिएको थियो ।
उपचारमा संलग्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर र नर्सको लापार्वाहिले बालकको ज्यान गएको उनिहरुले आरोप लगाएका छन । लापार्वाहि गर्नेलाई कार्वाहि र पीडितले क्षतिपुर्ति पाउनुपर्ने मृतक बालकका बुबा रुपेसले बताए । मृतकका परिवार, अस्पताल प्रशासन र मजदुर संगठनका प्रतिनीधिविच पटकपटक वार्ता भए पनि सहमति हुनसकेको छैन । रुपेसले आफुहरुलाई क्षतिपुर्ति भन्दा पनि न्याय चाहिएको बताएका छन ।
अस्पतालको गम्भिर गल्ती
उपचारमा सम्लग्न डाक्टर सन्तोष पाठक, नर्स एञ्जीला क्षेत्रि र सुस्मा खड््काको चरम लापार्वाहिले बालकको मृत्यु भएको परिवारले आरोप लगाएका छन । मृतक बालकका बुबा रुपेसका अनुसार रगतको रिपोर्ट र विभिन्न रजिस्टरमा समेत ९ महिनाको बच्चालाई २ वर्ष उमेर उल्लेख गरेर गम्भीर गल्ती गरेका छन । ९ महिनाको बच्चालाई २ वर्षको उमेर उल्लेख गरेर औषधी त्यहि अनुसार दिदा ओभरडोज भएर बालकको ज्यान गएको परिवारको दावी छ ।
यस्तै हातमा हाल्ने सिरिन्ज लोड गरेर लामो समयसम्म बाहिर राख्न नहुनेमा लोड गरेको ४० मिनेट भन्दा धेरैसमयपछि मात्रै बच्चालाई हालेको रुपेसको भनाई छ । लोड गरेको धेरै समय बाहिर राख्न नुहेने थियो भनेर केहि समयपछि डा सन्तोष पाठकले भनेको सम्झदै रुपेसले भने नर्सको गल्तीले बच्चाको ज्यान गयो । सामान्यतय सिरिन्ज लोड गरेपछि तत्कालै प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकको भनाई छ ।
यस्तै रोहित साह नाममा औषधि मगाई मृतक बालक रुप्सनलाई दिएको पाईएको छ । मृतक बालक रुम्सनको लागी औषधि किन्न बनाईएको विलमा रोहित साह उल्लेख गरेका छन । बालकका बुबा रुपेसका अनुसार पछि नाम अर्कै रहेको जानकारी गराउँदा पनि नाम मात्रै मिस्टेक भएको हो औषधि त्यहि हो भनेकाले त्यहि नाममा ल्याएको औषधि रुप्सनलाई दिएको थियो ।
१३ गत्ते मृत घोषणागर्नुअघि नै बालकलाई बचाउन नसक्ने भएकाले उपचारमा लागेको खर्च अस्पतालले व्यहोर्ने भनेको भन्दै मृतक बालकका बुबा रुपेसले भने अस्पतालले गल्ती नगरे किन उपचार खर्च व्यहोर्छु भन्र्छ ? प्रश्न गरे । अस्पतालले प्रहरी प्रशासन र शक्तिको आडमा घट््नालाई ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन ।
यस्तै बालकको मृत्यु भएको खवर राति गरेकोमा विहान जाँदा परिवारलाई कुनै पनि जानकारी नदिई बालकको सव गायव बनाएको बताए । अस्पतालले सव भरतपुर अस्पतालमा पठाएको छ । गत २ गते नर्सले इन्जेक्सन दिने क्रममा बच्चाको श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि सिपिआर गरिएको बच्चाका बुबा रुपेशले बताए। त्यसपछि उपचारका लागि भेन्टिलेटरमा राखिएको नाबालक रुप्सनको १० गते ज्यान गएको भन्दै अस्पातल प्रशासनले खबर गरेको उनले बताए। दिउँसो ४ः१५ मा नै बच्चाको ज्यान गएको भनेर आफूलाई राती १० बजे बल्ल खबर भएको उनले बताए। १० गते बिहानसम्म डा. पाठकले बच्चा बाँच्न सक्छ भनेको तर राति एक्कासी फोन गरेर बच्चाको ज्यान गएको खबर प्राप्त भएको उनले बताए । बच्चाको ज्यान गएको खबर अस्पातलबाट पाएपछि शव बुझ्न जाने क्रममा अस्पातलले शव नै गायब गरेको उनको आरोप रहेको छ । उनले आफूहरूलाई जानकारी नै नगराई बच्चाको शवलाई भरतपुर सरकारी अस्पातलमा र्पुयाइएको परिवारको आरोप रहेको छ।
मेडिकल कलेजद्धारा दुख व्यक्त
घटनाबारे चितवन मेडिकल कलेजले शनिबार साझ प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी अस्पतालमा भएको तोडफेडको खेद व्यक्त गरेको छ । नौ महिनाको बच्चा रुप्सन घिमिरेलाई चैत २९ गते उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेजमा ल्याएको जनाउँदै बालकको श्वासप्रश्वास सङ्क्रमण देखिँदा अस्पताललमा भर्ना गरेर राख्न भन्दा परिवारले भर्ना नगरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्छ भन्दा अभिभावकले चिकित्सकको सल्लाह नमानेर औषधि मात्रै लिएर बिरामीलाई घरमा लिएर गएको अस्पतालको भनाइ छ ।
बिरामीको अवस्थामा सुधार नआएपछि पुनः चैत ३० गते बिरामीलाई अस्पताललमा ल्याएर बाल रोड वार्डमा भर्ना गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उपचारका क्रममा बालकको स्वास्थ्य अवस्था क्रमिक सुधार हुँदै गएकोमा बैशाख २ गते बच्चालाई अचानक ‘एस्पीरेसन’ भइ ‘सडेन क्रेडिक एरेस्ट’ भएको र तत्काल बाल विशेषज्ञद्वारा बालरोग सघन उपचार कषमा लगी भेल्टिलेटरमा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । बाल रोग विशेषज्ञको टोलीले उपचार गर्दै गरेको अवस्थामा अचानक बैशाख १३ गते दिउँसो ४ः१५ बजे ‘ब्रोन्चीओलीस्ट, सेकेन्डरी ब्याक्टेरीयल इन्फेक्सन’लगायतका सङ्क्रमणका कारण बालकको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।